Ogaden News Agency (ONA) – Xisbiga OPDO/EPRDF oo dagaalo iyo colaad ka hurinaya xuduudaha u dhexeeya 2da shacab
Xisbiga OPDO/EPRDF oo dagaalo iyo colaad ka hurinaya xuduudaha u dhexeeya 2da shacab
Posted by ONA Admin	/ June 30, 2013
Gumaysiga Itoobiya oo ku caan baxay inuu dagaalo ka dhex huriyo shucuubta dariska ah ayaa shir xuduudaha ah ku qabtay magaalada Baabili shirkaas oo loo qabtay labada maamul kilil ee Somalida iyo Oromada, taasoo ay ku sheegeen in lagu xalinayo xasarado mudooyinkanba ka taagnaa tuulooyinka iyo magaloyinka xuduudaha. Shirka ayay dhanka maamulka Oromada uga soo qaybgaleen si rasmi ah oo wafti culus oo miisaan lehna ay ku yimaaden, meesha dhanka Somalida ay soo direen si ula kac ah horjoogayaashii tuulooyinkaas xududaha ku yaala. Shirka ayaa looga danlahaa in Somalida Ogadenya waxyaabo badan laga duudsiyo, sidii horeyba u dhacday, hasa ahaatee wuxuu ku soo afjarmay fashil iyo is afgaran waa, kadib markay diideen shacabkii Somalida ee deegaanka lahaa waxyaabaha uu gumaysigu soo dhoodhoobay ee la doonayay in lagu duudsiyo xaqooda. Siday filayeen gumaysatada Itobiya waxaa arinta awgeed uu dagaal ku dhex maray labadii shacab ee Oromada iyo Somalida ee tuulooyinkaa daganaa, waxaana gacanta sare lahaa shacabkii Somalida oo Oromadii xaqdarada ku socday ayaa loo awood sheegtay.
Kadib waxaa duulaan soo qaaday ciidamadii dawladda federaalka iyo booliska gumaysiga waxayna isku dayeen inay cagta mariyaan degmada Qubbi oo kamid ahayd meelihii sida aadka looga diiday isku dayga shirkii Baabili. Dagaal adag ayaa ku dhex maray ciidamada gumaysiga iyo shacabkii degmada Qubbi, dhibatoyin badan oo aanaan weli faahfaahin rasmi ah ka haynina ayaa soo gaadhey shacabka iyadoo dhaawac badan shalay la keenay magaalada Jigjiga.
Waxaa kaloo jira in 4 bari ka hor ay tageen magaalada Godey gacan-ku-dhiigleyaal Mukhtar iyo Shafi oy wehliyaan garsoorayaal ku sheeg, si ay u soo xukumaan 60 nin oo ka hadhay kooxdii Hawaarinta ee ka baxsatay kuna biiray badankood ONLF. Sidii dhaqanka u ahayd waxay daqiiqada ka dib ku xukumeen dhalinayaradaa aan waxba galabsan min 25 sano oo xabsi ah.
Halkan ka akhri barakicin horey loogu gaystay Somalida